Abidjan Blog Camps: Fetin’ny bilaogera Alloco ao Côte D’ivoire · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2018 3:00 GMT
Nandefa fanombanana ny bilaogy Ivoriana sy ny tontolon'ny bilaoginy taorian'ny roa taona nahombiazany i Théophile Kouamouo, mpitarika ny tetikasa , Abidjan Blog Camps, nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices. Mamaly ny sasantsasany amin'ireo fanontaniana toy ny hoe 1) manao ahoana ny toetry ny tontolon'ny bilaogy Ivoriana? 2) Inona avy ireo zava-tsarotra ankehitriny taorian'ny nahombiazany voalohany? sns. nandritra ny resadresaka niarahana tamin'ny bilaogera nahazo ny loka BOBS, Israel Yoroba (Yoro) tao amin'ny Radio Web Broadcast tao amin'ny Avenue 225 izy.
Tamin'ny Asabotsy 19 desambra 2009, natao tao Abidjan, Côte d'Ivoire ny andiany faharoa amin'ny Fetin'ny Bilaogera Alloco, nokarakarain'i Manassé Déhé (Cartunelo). Bilaogera Ivoariana am-polony no nanatrika izany, anisan'izany ireo bilaogera maromaro izay nanatrika ny Abidjan blog camps. Dinde Fernando nanoratra hoe:
Ny Fetin'ny Bilaogera Alloco dia hevitra noforonin'i Israël Yoroba sy ny ekipany kely mavitrika mba hanangona ireo bilaogera mipetraka any Côte d'Ivoire hiresaka ambony latabatra, mba hahafahan'izy ireo hifankafantatra tsara sy hiresaka momba ny asan'izy ireo. (dikan-teny milina)
Bob Traoré Djess manoratra ao amin'ny bilaoginy Cogito:
Mibilaogy aho, noho izany, bilaogera aho. [..] Tamin'ny Asabotsy lasa teo, niala tamin'ny virtoaly niditra tamin'ny tena fiainana, tamin'ny alalan'ny fivorian'ny Alloco ireo mpikambana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Ivoariana.
Tamin'ity andiany tamin'ny Alloco ity, nilatsaka ny saron-tava, ka afaka nifankahita mivantana ireo bilaogera rehetra tonga tao, nifanatrika, nifampitsapa sy nifanendry tanana. Farany, afaka nametraka endrika ny anarana tsirairay izy ireo.
Richman manazava ny ahiahy momba ny tombontsoa azon'ny bilaogera, izay noresahana betsaka nandritra ny fivoriana Alloco.
Edith Brou Yah kosa namaritra ny sakafo natolotra tamin'izany fivoriana izany:
Tamin'ny sakafo, nisy ny Alloco (nahandro nentim-paharazana any Andrefana sy afovoan'i Afrika), ny kiendiendy, ny akoho sy ny trondro nendasina, ny kédjénou nasiana sakay tsara sy ny attieke. Nisotro izahay, nihinana, nifampiresaka, nihomehy ary nifanakalo hevitra betsaka.
Yoro (Israël Yoroba) nankalaza ny faha-2 taonan'ny bilaoginy ary nilaza ny zavatra nentin'ny bilaogy taminy:
Mbola tsaroako foana ny herinandro voalohany nahazoako mpitsidika 10 tsy manam-paharoa (ireo rahalahy sy anabavy, ny sipako tamin'izany fotoana izany ary ireo namana sasany). Ankehitriny, manana fianakaviana bilaogera marobe aho, manana namana eto amin'izao tontolo izao …
Nihaona tamin'ireo olona izay tsy noeritreretiko ho hita mihitsy aho (afa-tsy tamin'ny fahitalavitra). Niditra tamin'ny toerana aho, izay na ny nofiko aza milaza fa tsy ho hisy izany. Roa taona lasa izay … tsy mbola nandeha lavitra tahaka ny nataoko nandritra ny 25 taona aho … Ghana, Dakar, Bonn, Marseille, Paris, Stockholm, Bamako. Ankehitriny, nahazo vatsim-pianarana hianatra any amin'ny sekoly ambony momba ny asa fanaovan-gazety any Eoropa aho.
Ny fahafaham-poko lehibe indrindra dia fisarihana bilaogera maro. Ary ankehitriny, lasa mihabetsaka,…..miha-betsaka hatrany ny fianakaviana.
Mitarika ny Avenue 225, sehatra mahomby momba ny asa fanaovan-gazetin'ny olon-tsotra ao Côte d'Ivoire i Israël Yoroba. Amin'ny anaran'ny Avenue 225, nampiofana mpanao gazety olon-tsotra valo izy tamin'ny volana lasa.
Mifototra amin'ny fahombiazan'ny Avenue 225, nanangana ny Avenue 223 ho an'i Mali mpifanolo-bodirindrina, izay hampiantranoin'ny bilaogera ao an-toerana ihany koa i Israel Yoroba. Natokana momba ny fiainana andavanandro sy ny raharaha andavanandro ao Mali izany.
Richman indray nandefa tantara mahaliana iray tany Côte d'Ivoire, fa misy ireo mpivarotra kafe sasany manome kafe amin'ny fifehezana ny heriny araka ny baikon'ny mpanjifa amin'ny fihetsika amin'ny tanana. Ka raha tsy mahafantatra izany ianao, dia mety hahazo kafe tsy tadiavinao ny fihetsiky ny tànana voajanahary.
Sary avy amin'i: Traoré de Djess sy Israël Yoroba